ခရီးသွားမော်ကွန်းတိုက် | တစ်ဦးကရထား Save
tag ကို: ခရီးသွား
နေအိမ် > ခရီးသွား
အားဖြင့် Elliot Rhodes
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ကောလိပ်ကျောင်းသူငယ်ချင်းများ၏ကုမ္ပဏီအတွက်ခရီးသွားသည့်အခါ, တစ်ဦးခရီးစဉ်ရှိသည်နှင့်မယ့်အလိုအလျောက်ဖြစ်မဿုံအဆင်ပြေထိုသို့. အဘယ်သူမျှမမျှော်လင့်ချက်များနှင့်အတူနေရာတစ်နေရာသို့မဟုတ်မည်သည့်ကြိုတင်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအလည်ခရီးအမှန်တကယ်ဝှက်ထားသောဘဏ္ဍာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာလုံလောက်အခန်းထဲမှာအရွက်…
ထိပ်တန်း5ဘရပ်ဆဲလ် မှစ. အကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ သင်ကသမိုင်းနှင့်အတူထိတွေ့ဆည်းပူးခဲ့ကြ, အတတ်ပညာ, နှင့်ဘရပ်ဆဲလ်နှင့်သင်၏ယဉ်ကျေးမှုကိုယခုမြို့နယ်နိမိတ်ပြင်ပတွင်စူးစမ်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ. ကံကောင်းတာက, ဘရပ်ဆဲလ်ကနေနေ့ကခရီးစဉ်အတွင်းလေ့လာစူးစမ်းဖို့အများကြီးလည်းရှိပါတယ်. ဒီတော့သိပ်ဒါ, ငါတို့ဆုံးဖြတ်ပြီ…
ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထားခရီးသွားလူဇင်ဘတ်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ဥရောပခရီးသွား
အားဖြင့် gor Karapetyan
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ဥရောပကမ္ဘာပေါ်မှာသမိုင်းအရေးပါမှုရှိသည်သောက၎င်း၏ဗိသုကာနှင့်သမိုင်းဘုန်းကြီးကျောင်းများဘို့အခြားသူတွေအမှုအရာတို့တွင်အကျော်ကြား. ဤဆောင်းပါးသည်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးရေးသားခဲ့ခြင်းနှင့်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားအားဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်, ကမ်ဘာပျေါမှာစျေးအချိုဆုံးရထားလက်မှတ်တွေဝက်ဘ်ဆိုက်. Noravank,…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ သင်ဘယ်မှာဥရောပအကောင်းဆုံးပြတိုက်ကိုရှာအံ့သြနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဖုံးအုပျပါပြီ! ဒါကြောင့်အနုပညာဟုတ်မဟုတ်, အမျိုးသားရေး, သို့မဟုတ်သဘာဝသမိုင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ list ကနေပြတိုက်ကိုသင်အလွန်အံ့သြစေရန်ပျက်ကွက်မည်မဟုတ်. ပိုကဘာလဲ, သငျသညျရထားဖြင့်ဤအရာအလုံးစုံနေရာများရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားဆွီဒင်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ...
အားဖြင့် Mandeep Singh က
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ နွေရာသီတံခါးခေါက်သည်လူတွေကွဲပြားခြားနားသောနေရာများအတွက်တစ်ဦးအေးမြနွေရာသီအားလပ်ရက်ဖြုန်းဖို့စီစဉ်နေပါတယ်. သင်၏ရထားလက်မှတ်ကိုကြိုတင်မှာထားခြင်းကခက်ခဲလိမ့်မည်၊ အကြောင်းမှာရှည်လျားသောတန်းစီတန်းတစ်ခုရှိပြီးသင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုရှာနေလျှင်ဖြစ်လိမ့်မည်…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ သငျသညျဥရောပတိုက်တွင်အပန်းဖြေဥယျာဉ်ကိုအကောင်းဆုံးနေသော၏သေချာမသိရှိပါက, ထို့နောက်အဘယ်သူမျှမနောက်ထပ်မကွညျ့. ဤဆောင်းပါးသည်ညာဘက်ယခုသင်ဥရောပတိုက်တွင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်အကောင်းဆုံးအပန်းဖြေဥယျာဉ်တချို့၏စာရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်! တစ် ဦး ချင်းစီ၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များနှင့်မည်သို့ဖော်ပြပေးပါမည်…
ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဘဝကပိုလွယ် Make
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ငါ avid ခရီးသွားဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်လည်းတစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားကြောင်း. ဒီဖြစ်ခြင်းရဲ့အကောင်းဆုံးအရာကသင်ကမ္ဘာကြီးကိုတွေ့မြင်နိုင်ပြီးမည်သူမဆိုလွတ်လပ်ခွင့်ရရန်စောင့်ဆိုင်းစရာမလိုဘဲခရီးစဉ်တစ်ခုစီစဉ်ရန်နှင့်သူတို့၏အဆင်ပြေမှုများသို့ပို့ဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။…
10 ရထားဖြင့်ပြင်သစ်ခုနှစ်တွင်ချစ်စရာကောင်း Castle
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ သငျသညျရထားခရီးသွားနဲ့တူသလား? သငျသညျပြင်သစ်ကဲ့သို့သောနိုင်ငံများတွင်အတွက်အံ့သြဖွယ်ရဲတိုက်ကိုမြင်လျှင်နဲ့တူသလား? သောအမှုဖွင့်လိုလျှင်, ထို့နောက်သင်သည်လက်ျာရာအရပ်ကိုရောက်ရှိပါပြီ. ဆိုလိုသည်မှာဤဆောင်းပါးကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့င် “10 ရထားဖြင့်ပြင်သစ်ခုနှစ်တွင်ချစ်စရာကောင်း Castle” သင့်ကိုပြတ်သားတဲ့စာရင်းတစ်ခုပေးလိမ့်မယ်…
ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ဂျာမဏီသဘာဝကျကျလှပနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်. သင်တို့မူကားရဲတိုက်အကြောင်းကိုစဉ်းစား start သည့်အခါ, သငျသညျ ပို. ပင်ကခစျြလိမျ့မညျ. ဂျာမဏီသောကွောငျ့ကြောင်းနှင့်အားလုံး, အမြားအပွားသည်နှင့်အညီ, ကမ္ဘာ၏ရဲတိုက်မြို့တော်. ဂျာမနီမှာအံ့ဖွယ်ရဲတိုက်တွေအများကြီးရှိတယ်…